Nomelohin’ny Fitsarana ao Krimea bodoin’i Rosia higadra enin-taona an-tranomaizina ilay mpanao gazety mahaleotena · Global Voices teny Malagasy
Miantso hamotsorana an'i Yesypenko eo-noho-eo ireo mpiaro ny fahalalahan-gazety
Voadika ny 23 Febroary 2022 7:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, українська, русский, Español, English
Hetsipanoherana ho fanohanana an'i Vladyslav Yesypenko tao Kyiv, Okraina. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i Radio Free Europe/Radio Liberty.
Nomelohin'ny fitsarana napetraky ny Rosiana iray tao an-tanàndehiben'i Simferopol ao Krimea voabodo higadra enin-taona i Vladyslav Yesypenko, mpanao gazety mahaleotena miaraka amin'ny Radio Free Europe/Radio Liberty. Efa voampanga i Yesypenko teo aloha tamin'ny resaka fitazonana sy fitaterana baomba, fiampangana nolaviny tanteraka.
Namoaka didim-pitsarana ny Fitsarana ao Simferopol tamin'ny 16 Febroary taorian'ny fitsarana tsy azo natrehina izay tsy nisokatra ho an'ny mpanao gazety. Nangataka tamin'ny fitsarana ny fampanoavana tamin'ny voalohany mba hanasazy ilay mpanao gazety higadra 11 taona an-tranomaizina.
Nandritra ny fotoam-pitsarana tamin'ny 15 Febroary, nijoro ho vavolombelona i Yesypenko fa ireo manampahefana Krimeana notendren’i Rosia dia “te hanaratsy ny asan'ilay mpanao gazety mahaleotena izay te-hampiseho ny zava-misy marina ao Krimea”.
Niasa tao Krimea voabodo nandritra ny dimy taona mahery i Yesypenko, izay mizaka ny zom-pirenena roa Rosiana-Okrainiana, ary nandray anjara tsy tapaka tamin'ny tetikasa an-tserasera RFE/RL Ny Zava-misy ao Krimea izay mitatitra ny fiainana andavanandro ao amin'ny saikinosy Krimeana. Nogadraina tany Krimea tamin'ny volana Marsa 2021 ilay mpanao gazety noho ny fiahiahiana azy ho nanangona vaovao ho an'ny fitsikilovana Okrainiana. Nandritra ny fihazonana azy am-ponja, voalaza fa niaritra fampijaliana teo am-pelatanan'ny sampan-draharaham-piarovana federaly Rosiana sy ny mpitandro ny filaminana Krimeana i Yesypenko.
Mpanao gazety mahaleotena am-polony hafa, mpanoratra ary mpamorona miasa ao Krimea sy any atsinanan'i Okraina voabodo no niatrika faneriterena mitovy amin'izany, ka ny sasany nogadraina ary maro no nalefa sesitany.
Ny raharahan’i Yesypenko no nifantohan'ny Fanentanana ho an'ny Empty Chair Day tamin’ny taon-dasa, nokarakarain'ny PEN America tamin'ny volana Novambra 2021 ho fanohanana ireo mpanoratra sy mpanao gazety Okrainiana nogadraina noho ny fanoratany na ny fanehoan-keviny tany amin'ny faritra voabodo ao Okraina Atsinanana sy Krimea.
Nanameloka ny didim-pitsarana ilay mediatora Okrainiana Lyudmyla Denisova, niantso ny raharaha hanenjehana an'i Yesypenko ho “namboamboarina.” “… namboamboarina ary misy antony ara-politika ny fiampangana an’ilay teratany Okrainiana,” hoy izy tao amin'ny Telegram, raha nitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro an'i Yesypenko.
Nanao antso avo tamin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny mpiaro ny zon'olombelona ihany koa i Denisova mba hanohy hanara-maso ny “fanitsakitsahana ny rafitry ny zon'ny olom-pirenena Okrainiana amin'ny fiampangana ara-politika ataon'ity firenena mpanani-bohitra ity”.
Nangataka ny hamotsorana an'i Yesypenko tsy misy hatak'andro raha tsy misy ny porofo hiampangana azy na antony hitazonana azy ireo mpiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety toa ny Komity Miaro ny Mpanao Gazety sy ny Reporters Sans Frontières, miaraka amin'ireo tompon'andraiki-panjakana toa ny Minisitry ny Raharaham-bahiny any Okraina Dmytro Kuleba sy ny Departemantam-panjakana Amerikana.
Nangataka ny hamotsorana ireo mpiasan'ny fampitam-baovao rehetra voafonja any amin'ny faritany Okrainiana nobodoina tsy ara-dalàna ireo vondrona mpiaro ny zon'ny fampitam-baovao hafa, miaraka amin'ny Vondrona Iraisam-pirenena ho an’ny Fahalalahan’ny Fampitam-baovao, manameloka ny ezaka ataon'ny manampahefana Rosiana sy mpomba an'i Rosia, izay mitohy nanomboka hatramin'ny 2014, mba hanakanana ny fanontam-baovao sy ny fandefasam-baovao mahaleotena ao Crimea sy ao amin’ny faritra bodoina ao Donbas.